CU metụtara CUV sud
TUV n'ebe ndịda n'ime China, na-ewu ngwa ngwa mmetụta. O guzobela ụlọ nyocha na ndịda China. Kemgbe 2004, o guzobere nnabata miri emi na nso nso ya na nyocha anbotek. Anbotek ejirila nwayọọ nwayọọ bụrụ onye ikike, ọsịsọ na ọwa ọkachamara maka ndị ahịa itinye akwụkwọ maka TUV asambodo nke UPS, nkwụnye ọkụ na oriọna. Nnwale Anbotek abụrụla onye mmekọ TUV nke otu ndịda ruo ọtụtụ afọ, ogo azụmahịa bụ nke mbụ na ụlọ ọrụ ahụ, ọ bụkwa ụlọ nyocha kachasị mma na ndịda China na 2009, 2010, 2011 na 2012. Anbotek ule anwalela nke ọma etinyere maka TUV ndịda asambodo nke fọrọ nke nta 500 ụlọ ọrụ, nke na-ebe ghọtara site ahịa.
Nnwale Anbotek na enyere gị aka inweta TUV asambodo ihe dị mfe
Mere otu ngwugwu ngwa uru - a set nke otu sample àmà ule, otu oge ngafe, ebelata asambodo okirikiri, nke mere na ị nwere ike ịtọ uche gị na udo iji ngwa ngwa nweta dị iche iche asambodo nyere site TUV, nke mere na gị na ngwaahịa ngwa ngwa rere gburugburu ụwa;
Reason 2: asambodo okirikiri na ego nwere oke ịsọ mpi -TUV na-enye anbotek ya na ndị otu injinia ya na onye na-ahụ maka visa, ma na-ebute ụzọ iji lebara ụdị okwu niile anya yana asambodo iji hụ na ọnụ ahịa nyocha na asambodo nwere ihe doro anya. uru karịa ndị ọgbọ.
Anbotek nwere ọgaranya n'otu oge nhazi usoro ihe omimi nke ụdị pipeline, ikpe nke oge a ga-akwụ ụgwọ, ụgwọ ọnụ ahịa ga-aba uru karịa uru atọ nkwụsị ọrụ - nchọpụta anbotek na-enye ụkpụrụ ntụzịaka ndụmọdụ niile nke ngwaahịa maka ngwa ngwa nsụgharị ngwaahịa. Ntuziaka nyocha ihe nrụpụta ihe, dị ka ọrụ nkwụsịtụ;
Ihe kpatara anọ: naanị TUV otu ọrụ VIP - meriri nsọpụrụ nke ezigbo onye òtù ọlụlụ nke TUV maka afọ anọ sochirinụ, nwee ọ theụ ọgwụgwọ kachasị elu nke ọkwa mbụ, iji hụ na ngwa anyị maka ọrụ ọ bụla nwere ike bụrụ nnukwu uru na ọgwụgwọ VIP;
Ihe kpatara nke 5: gbado anya na ngalaba asambodo TUV maka afọ iri - ihe kariri okwu ikpe 100 kwa afọ, onye maara ikike nke ngwa TUV iji mee ngwa ngwa lebara nsogbu anya na imekọ ihe ọnụ nke otu TUV, ka usoro ngwa ngwa gị siri ike bụrụ onye dị mfe ma nwee njikwa;
Reason 6: ezigbo mmekọrịta dị n'etiti akwụkwọ na-eweta gị n'ụlọnga - anbotek ule mbak na agadi management nke German TUV mgbanwe nleta na nkwukọrịta ọtụtụ ugboro kwa afọ, nke mere na anyị nwere ike ịmụta isi asambodo ego na-eme ka ọrụ nke TUV ọzọ adaba na n'usoro na ahịa ina
TUV na anbotek nkwado nsọpụrụ
TUV kacha mma mmekọ maka South Africa na 2009, 2010, 2011 na 2012